FXSplitter EA Review - Best Forex Who Am si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- FXSplitter EA 1
Ahịa: $ 169 (2 LIVE akaụntụ, FREE mmelite & Nkwado)
Ego ụzọ abụọ: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPCAD, GBPCHF na NZDCAD
Nyochaa FXSplitter EA - Onye Nleba Anya Na Ntanetịị Forex na Rosemary Basket Trading
FXSplitter EA bụ a nnọọ ike ọkachamara Advisor na Ngwongwo nkata ịzụ ahịa nke Forex kere site Argolab otu. Ọ na-etinye ndị mmadụ n'otu oge n'oge oge. Mgbe oghere oge ọzọ, nke a FX bot ga-etinye ọhụụ ọhụrụ, ma ọ bụ mechie azụmahịa dị ugbu a, ma ọ bụ mee ma, maọbụ mee ihe ọbụla, dịka atụmatụ algorithm na-ewu.
a ọkachamara Advisor bụ onye na-azụ ahịa martingale. Ya mere, dika ọnụ ọgụgụ ndị ahia na nkata na-etolite, a ga-emeghe ahịa ndị ọhụrụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu. Mgbe uru ntinye nke nkata ruru na ọkwa nke a nyere, a na-emechi nkata niile, a malitekwara nke ọhụrụ.
FXSplitter EA ga-arụ ọrụ nke ọma na ọtụtụ ndị na-ere ahịa, 4-digits na 5-digits alike. Ị nwere ike ịhọrọ onye na-ere ahịa na obere mgbasa maka ụzọ ị ga-azụ ahịa na iji nwayọọ nwayọọ na-atụgharị. Ọ bụrụ na nkwụnye akaụntụ gị ezughị oke maka nhazi usoro ego, ị nwere ike ịchọ iji akaụntụ ego. Nke a ga-egbochi gị ịhọrọ brokers, dịka ọ bụghị ha niile na-enye ego akaụntụ.
Ị na-enwetakwa nkwado ahịa na nkwado na ụzụ. Otu onye nkwado ha dị inyere gị aka site na e-mail na ọbụna TeamViewer ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọ bụla.
FXSplitter EA e mepụtara otu ọkachamara ìgwè ndị ọkachamara ahịa ndị na-achọ ịhụ gị ịga nke ọma!
FXSplitter EA - Amabughị Azụmahịa Forex?
Ịzụ ahịa Forex dị mkpụmkpụ maka Foreign Exchange Trading na-ezo aka uru ma ọ bụ ọnwụ na a mere erekwa dị iche iche mba ọzọ ego megide onye ọ bụla ọzọ. The ọmụmụ nke dị iche iche azụmahịa mba na mba, otú geo-na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihe-agbasa ndị ahịa na analysis nke nkwụsi ike na ọkwa nke a ụfọdụ aku na uba na-eme ka enyere a ahia na adabere na ya kpebie nke mba ọzọ ego bụ ihe na-ewusi megide ibe ya.
Jiri nke FXSplitter EA na-atụgharị gị ego n'ime ọlaedo!
FXSplitter EA - Banyere Trading Logic, Mbido na ndị ọzọ chọrọ
Usoro ahia nke FXSplitter EA dabere n'eziokwu ahụ banyere 80% oge ahịa na-anọgide na "usoro". Nke pụtara na ọnụahịa ahụ egosighị ọhụụ ọ bụla n'ime ntụziaka ọ bụla, ogologo ma ọ bụ mkpirikpi. N'ihe na-emeghị nke ọma, ọnụahịa na-emekarị n'agbata ọkwa dị elu na nke ala nke ọwa ahịa. N'iburu na nchọpụta a, Onye Ahịa Na-enye Ndụmọdụ na-ebute ahia mbụ ya megide mmegide ikpeazụ nke ọnụahịa ahụ, na-eche na ọ ga-abụrịrị na ọnụahịa ahụ ga-alaghachi na ọnụ ahịa ya.
Ọ bụrụ na ndị price doo trading ọwa na-aga n'ihu n'ihu na a direction, FX Splitter ga tinye ọhụrụ trades na-amụba n'ozuzu ọnọdụ. Mgbe a esiri-azụ nke price emee, FXSplitter EA closes dum nkata nke iwu ma ọ bụ, mgbe ụfọdụ, otu onye iji, dabere na ahịa ọnọdụ na ntọala.
Nkọwapụta nke usoro azụmaahịa dị ugbu a yiri nke ahụ yiri nke ọtụtụ martingale EA nke ọzọ. Yabụ, kedu ihe bụ isi ọrụ nke FXSplitter EA na-eme ka ọ dị nnọọ iche na nke ọzọ Expert etozu? The etu esi nke FX Splitter bụ na ọ na nsị onye trades na ofu etiti oge nke oge. Mgbe oge ọzọ oghere emee, Forex robot eneme ahịa na ọnọdụ na nsị a ọhụrụ ahia ma ọ bụ closes otu ma ọ bụ ọtụtụ nke ẹdude trades. Ndị ọzọ okwu, ndị trading ezi uche nke a FX bot abughi ma mgbe niile na-agbanwe agbanwe na n'ịgbanwe ahụ n'ezie ahịa ọnọdụ.
Ụzọ a dị nnọọ iche na usoro a na-akpọ gọọmentị martingale. Na nke a, a na-agbakwụnye ndị ahịa ọhụrụ na nkata mgbe ọnụahịa na-eme ka ọnụ ọgụgụ pips. N'oge ọgba aghara ahịa, a maara ọnụahịa ahụ iji mee ngwa ngwa ngwa ngwa nke nwere ike ikpuchi ọtụtụ narị pips. Mgbanwe ngwa ngwa nke ọnụahịa ahụ nwere ike "ịkwatu" usoro ọ bụla. Ọ bụghị otú ahụ FXSplitter EA. N'oge ahia ahia, ọkachamara ọkachamara na-emepe ahịa dị nnọọ anya site na ibe ya. N'ahịa na-adịghị ike, ọ nwere ike mepee ọtụtụ trades dị ka 5 pips.
FXSplitter EA - More Ozi banyere nke a bara uru Forex Trading Sistem
Nsogbu ọzọ na-ahụkarị na ígwè ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-azụ ahịa bụ na ha nile na-echere ụgwọ ahụ iji mee ka a kwụpụta ya iji mechie nkata nke iwu na uru. Kedu ihe ma ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ ga-atụfu uru-uru site na ole na ole pips wee nọgide na-emekarị ije megide basket? Nke a bụ ọnọdụ dị egwu na nke dị egwu nke nwere ike iduga "ịfụ" elu ego.
FXSplitter EA nwere na-Mee proprietary algọridim na-mee ka ọnọdụ ndị dị otú. Nke a algọridim na-agụnye dị iche iche nke logics maka imechi ndị trading iwu. N'oge a esiri-azụ nke price, ndị ọkachamara Advisor ga-emechi dum nkata nke iwu ma ọ bụrụ na esiri-azụ bụ ike iji mee ka dum nkata uru. Ọ bụrụ na ndị esiri-azụ bụ ike na-adịghị, a Forex robot ga-emechi naanị otu ma ọ bụ ọtụtụ iwu na nkata. N'ụzọ nke a,
FX Splitter na-ebelata ibu na nkwụnye ego ma ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ nọgidere na-aga n'ihu mgbe ọ na-emegharị obere obere azụ.
FXSplitter EA - Ndụmọdụ ndị ọzọ dị mkpa maka ndị ndụmọdụ ọkachamara a Forex
FXSplitter EA e mere maka erekwa on EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPCAD, GBPCHF na NZDCAD ego abụọ na 1 hour oge. Ị nwere ike ịmalite dị ka 70 $. Maka nke a, ị ga-achọ otu akaụntụ cent na obere nha nke 0.01.
Anyị na-akwado leverage 1: 500, dị ka ọ na-ebenata na ihe odide n'akụkụ ibu na gị ego. Ma nta leverages ka 1: 300 na 1: 200 kwekwara omume.
Dabere na mwube, FXSplitter EA mepee ahia kwa awa ma ọ bụ oge ọ bụla (2-6) awa. Ọ bụrụ na ọnọdụ ahịa anaghị adaba maka ịmepe ahia, EA nwere ike ịfe oge oghere ahịa.
FXSplitter EA - Nnukwu uru Akụrụngwa Azụmahịa Forex Akụrụngwa
FXSplitter EA nwere usoro ntọala siri ike ma gbanwee. I nwere ike ime nke ọma-gwa EA ka ị zụọ ahịa ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ ọ bụla. Ịzụ ahịa n'otu oge ọtụtụ ụzọ ego dị iche iche na-emeghe ohere dị iche iche maka ịmepụta pọtụfoliyo dị iche iche.
N'oge ahụ ndị edemede nke ngwanro a na-enye ntọala ndị a tụrụ aro maka ụdị ego abụọ 10; n'ihi na ọtụtụ ntọala abụọ na ọkwa dị iche iche nke ịkpa ike dị. Ntọala niile na-abịa n'efu maka ndị ọrụ anyị. Nkọwa zuru ezu maka ịmalite na configuring FX Splitter nakwa dị ka ikenyeneke mbiet oru nkwado na-nyere.
FXSplitter EA Kwesịrị ịnọgide na-arụ ọrụ site na mmepe ahịa na Monday na ahịa na-emechi na Friday. Ịnwere ike gbanwee kọmputa n'ime izu ụka na ezumike ụlọ akụ ma ọ dịghị mkpa.
FXSplitter EA bụ n'otu ntabi dị na unbelievable price, ie naanị $ 169. Ya mere echela ka jidere gị oyiri!
Gaa Leta Official FXSplitter EA website
0 Kedu otu esi